Ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dib ugu laabtay Muqdisho
» Ra'iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dib ugu laabtay Muqdisho
R'aiisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta oo Axad ah dib ugu soo laabtay dalka, kaddib markii ay soo guteen waajibaadka xajka ee sannadkan.
Wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ay ku jireen wasiirro, xildhibaanno iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda ayaa waxaa soo dhaweeyay xubno isugu jira xildhibaanno, wasiirro, fanaaniin, ciidan iyo xubno kale, kuwaasoo uu horkacayay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka ganacsiga iyo warshadaha.
Dr. C/weli Gaas oo xirnaa koofiyad ayaa markii uu kasoo dagay diyaaraddii uu la socday wuxuu saxaafadda siiyay hadal kooban, isagoo sheegay inay si wanaagsan u soo guteen waajibaadka ayna dib ugu soo laabteen dalka.
"Waxay ahayd markii iigu horreysay oo aan xajiyo, isla markaana aan tago Maka iyo Sucuudi Carabiya, runtiina waxaan u soo duceeyay shacabka iyo dalka Soomaaliya si Alle uu dhibka uga saaro," ayuu yiri ra'iisul wasaare C/weli Gaas.
Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in intii uu ku sugnaa dalka Sucuudiga uu kulan la yeeshay madaxa bankiga Islaamka Dr. Axmed Maxamed Cali, uuna kala hadlay mashaariicda uu bankigu ka fulinayo Soomaaliya.
Ugu dambeyn, ra'iisul waasaruhu wuxuu gacan-qaaday dhammaan xubnihii kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Muqdisho, isagoo sheegay in Soomaalidii xajiyay sannadkan ay Alle ka baryeen inuu Soomaaliya kusoo celiyo nabad.
Anonymous11/14/2011Asc wr wbMaamulka RG waxaan idinkula talinayaa inaad iska deysaan arrimaha siyaasadda, waayo baraha wax qora siyaasadda way fara badan yihiin, xiisana looma qabo. Haddaba maadaama aad idinku ka hadashaan arrimaha qoyska, gaar ahaan dhanka galmada waxaan idinkula talin lahaa inaad intaas ku ekaataan oo aad noqotaan bar takhasus ku leh arrimahaas keliya. Intaan ogahay ma jiraan baro kale oo ka hadlay arrimaha aad ka hadashaan. Marka waxaad haysataa arrin aad khaas ku tihiin oo dadkuna xiiseynayaan ee ha isku dhex darina barahana faraha badan ee siyaasadda isku mashquuliya.ReplyDeleteRG11/14/2011Walaal waad ku mahadsantahay webkan takhasuskiisu waa raaxada guurka laakin mar mar ayaa loo baahanyahay in siyaasad dadka la xusuusiyo si fududReplyDeleteAdd commentLoad more...